923 - ukuthi esifundeni kanye opharetha? 923 no-opharetha
Izwe mobile impela eningi opharetha ezahlukene, futhi akunandaba ngempela ukuthi umuntu obhalisile angangeza badinge nje ukuthi ubiza inombolo yenkampani. Lokhu kungenxa yokuthi u-opharetha ngamunye has imvamisa yayo lapho esebenza futhi ungadlulisela igciwane amasignali emazingeni ehlukene, kanye iqoqo ticalo ezingakaze zibe uxhumano esithile, ukuze uthole bedidekile.
Inguquko ababhalisile kwenye opharetha
Muva nje, ngo-2013, kwaqala iMpi ukuqedwa "ubugqila mobile", okuyinto lihlotshaniswa embonweni wokuthi inani wona awuzange kuboshelwe yimuphi umqhubi. Ngakho, lo muntu wabona izimo ezikahle kwenye inkampani ingase, ngaphandle kokushintsha izinombolo, isivumelwano inkonzo nomunye opharetha.
Inombolo ni kubiza cishe u- $ 100 bese ithatha esingaphezu kosuku olulodwa. It kumele icaciswe ngesikhathi egcwalisa isicelo.
Nokho, abantu abaningi abazi ukuthi ngempela olandelanayo. Uma umuntu esebenzisa inombolo uqala ngo 8923 (esifundeni - eKemerovo esifundeni), ezimweni eziningi, singasho ukuthi iSIM khadi kungokwalabo opharetha "MegaFon".
Funda izinombolo ubulungu
Kunoma ikuphi, ubiza izinombolo ezingaziwa kakhulu hlola lapho opharetha okuzifanele. Ababhalisile "megaphone" ingahlaziya ngosizo USSD umyalo * 629 # mahhala. Esikrinini elincane mobile device screen livela, lapho ufaka inombolo ngaphandle 8, isibonelo, 923. Yikuphi esifundeni kanye opharetha ukukhonza isikhokhelo kukhonjiswa. Zonke izinombolo afakiwe amadijithi amathathu ngokuzikhethela abalandelayo anele isiqalo, futhi esikhundleni ukuphumula - zero.
Inkampani MTS futhi abe ithimba ukuqinisekisa inombolo sokusebenzisana - inombolo * 111 * 916 * ifoni # 8 ngaphandle. Kuyadingeka ukuba uqaphele ukuthi isicelo imali, 2.17 deda.
Beeline inikeza isevisi eliphakeme: * 444 * inombolo yefoni # 8 ngaphandle. Kulokhu, lapho zokubhalisa uthola i-SMS isicelo kolwazi, enomnikazi izinombolo langena inikezwe opharetha mobile noma cha.
Umthamo base ilayisensi phakathi opharetha mobile uyashintsha njengoba nezokuxhumana buyashintsha, kuba eziteshini base ezingasho. Uma ngaphambili bewukwati ngokuqiniseka mayelana nenani, okuyinto iqala ngo 923, okuyinto isifunda opharetha, namuhla kufanele uhlole imininingwane.
Ngokwesibonelo, izinombolo manje ngokusebenzisa esitolo inthanethi "megaphone" angathengwa oqala 999. Lezi amakhadi sim ahlelwa nge website wenkampani e Krasnoyarsk, Omsk naseNovosibirsk izifunda.
Naphezu kwalezi zinguquko eziningi, indlela ejwayelekile ukukhuluma mayelana inombolo 923 (yisiphi isifunda kanye opharetha ukhonza SIM khadi) kungaba nakanjani - umnikazi walo - "MegaFon", eSiberia Yegatsha. I database kuhlanganisa izindawo eziningana ngisho republic:
esifundeni elisanda kushiwo, Krasnoyarsk indawo;
Republic of zaseTuva futhi Khakassia
Norilsk futhi Taimyr MR.
Ngokuvamile, ikhodi opharetha 923 babelwa bonke ababhalisile of "megaphone". Kamuva, lapho abasebenzisi baba amakamelo angaphezu kwaba akwanele, futhi umthamo luyanda. Futhi waqala ukunweba geography kwezokuxhumana kanye eziteshini base babe ezindaweni ezikude yeSiberia. Ngakho-ke, kudingeka isiqalo esisha - 929.
Ngaphezu izinombolo federal, opharetha umthamo 923rd inikeza nesakhiwo ezisemadolobheni. Ezindaweni ezahlukene laseSiberia esifundeni izinombolo awafani.
Ukuze ukuthole enanini yolayini olubaluleke federal, ungabiza Centre Ukusekela Amakhasimende, noma ubhale ekuhluphayo iwindi lengxoxo kusayithi "MegaFon" inkampani
USSD - izicelo
inkampani yeselula ababhalisile yayo futhi inikeza nezinye izinsiza. Abanaso ireferensi esifundeni, njengoba jikelele ababhalisile yonkana Russia.
Ngokwesibonelo, hlola zakho abasebenzisi ekamelweni angasebenzisa umyalo * 205 #, futhi uthole tariff yakho - * 105 #.
Kumele kukhunjulwe ukuthi uzulazula umyalo idatha zingeke zisebenze. Kudingeka nokuba athole ngokucophelela kubo ngoba inhlanganisela ayilungile, ngisho endaweni ekhaya, kungaba imali - ruble 5 kuya ku-60.
Ungakwazi Yiqiniso, xhumana Customer Support Centre kanye ukuveza isimo, ushiya isicelo ochwepheshe zezimali. Zingakapheli izinsuku 5-7 imali ungabuyisa ukulinganisela phakathi kwemithwalo yakho.
Kuye ngokuthi yiziphi izinombolo avame ubiza isikhokhelo 923, ukuthi yisiphi isifunda kanye opharetha interlocutor, ungakwazi sithathe ngesilinganiso evumayo kakhulu. Uma uxhumano esifundeni efanayo, kodwa kungokwalowo enye inkampani, kukhona inkonzo ekhethekile, ikuvumela ukuba ukukhuluma nabangani at isaphulelo, noma amanani, okuyinto kungenzeka ukuxhumana yenombolo khulula elimisiwe imizuzu.
Kukhona yamanani, akuvumela ukuthi ukuxhumana "MegaFon" ababhalisile, okuyinto ukuqala izinombolo, isibonelo, 929 noma 923.
Yikuphi esifundeni iyi opharetha interlocutor neze lutho, ngoba kukhona njalo ukuthi kungenzeka ukuxhumana ngaphezulu ngemali ephansi kuka ngamanani eziyisisekelo.
Ngaphandle esifundeni ikhaya
Ewufanele ingxoxo ehlukile uzulazula ababhalisile. Ngokwesibonelo, inombolo enikeza opharetha laseSiberia (923 kanye 929) kusuka ngaphandle esifundeni ekhaya, bhalisiwe e inethiwekhi wavakashela.
Ngakho-ke, izindleko izingcingo ikhaya uyoba okuningi eqolo ngaphezu kokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, akukho namasevisi ngeke usebenze. Endaweni inombolo 8923 yefoni (esifundeni ukukhonza amandla kuboniswe ngenhla) ingabizwa ekhadini le-SIM, okuyinto etholakala ngaphandle esifundeni ekhaya, kunoma iyiphi idolobha noma izwe ngendlela efanayo njengenjwayelo - at izindleko yokugibela yakhe.
Uma izinombolo zokubhalisa nganoma isiphi isizathu unganelisekile, bona kungashintshwa ngaphandle kokushintsha ikhadi le-SIM. Kuye ngokuthi isiqalo linenani - 8929 noma 8923 yisiphi isifunda (indawo egatsheni laseSiberia) igcina ikhadi le-SIM, nezinye nemingcele oyikhethile inombolo entsha zokubhalisa.
Yomiselela ngeke sikukhokhise. Lapho inombolo, ayanda izindleko. Kukhona esiliva, igolide ne-platinum izinombolo. Ungashintsha ngisho iqoqo digital ukuze wayefana endala, kodwa kwahluka by idijithi elilodwa. Ngesikhathi esifanayo kwi-SIM khadi ngokwayo ayishintshi ngokuphelele noma yini - futhi izinga noma ibhalansi, noma kunoma yimaphi amasevisi. Ngakho, ukubizelwa zokubhalisa ngenani ubudala ngeke.
Isevisi inikeza ithuba wazise abangani mayelana amakamelo ushintsho, "MegaFon" ubizwa ngokuthi "Inombolo yami okusha".
Ngikubheka kanjani ukuba kwami traffic MTS ibhalansi?
Volkswagen Tiguan imoto. Izibuyekezo
UPrincess Anne (United Kingdom): Umlando
Ikamu Wezingane "Petrel"
Kuhle izinwele umbala. Izibuyekezo ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Hotel Royal Bay 4 * (Bulgaria, Elenite): Ukubuyekeza, izithombe, izibuyekezo